China Inotakurika Tescar Therapy CET RET RF ine Vacuum System vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Inotakurika Tescar Therapy CET RET RF ine Vacuum Sisitimu
2021 Yakanakisa Muviri Kuumba Muchina
448khz Tescar kurapa CET RET RF ine Vacuum
CET Inoshanda RF
RET Resistive RF ine Vacuum
1) Kurudzira kutenderera kweropa uye kugadzirisa metabolism uye hutachiona.
2) Rongedza endocrine, kunatsiridza kurara, kubvisa kuneta.
3) Inosunungura uye inorapa zvikamu zvakasiyana zvemuviri, senge cervical spondylosis, lumbar spondylosis, fudzi rakagwamba, nezvimwe.
4) Chiso chinosimudza, kunatsiridza ganda ganda uye kudzora kumeso kukwegura.
5) Kuvandudza saizi yemuviri, kudzikisa visceral yakawandisa mafuta, kuonda uye kuumba.
6) Dzosera zvakajairika sensu shanu nekuzorodza mhasuru nemaseru.
7) Inobatsira nekutanga kupora kweiyo ligament sprains, mhasuru tambo, kukuvara kwemhasuru, uye kurwadziwa muviri
8) Gadzirisa zviratidzo zvekutonhora kwemuviri, yakaderera basal metabolism, inotonhora maoko nemakumbo, nezvimwe
● Mutemo weCET
CET tembiricha yenguva dzose paepidermis, uye yakadzika-redhiyo kupisa ndiyo tekinoroji tekinoroji yekuona kuti ganda rakasununguka uye harina kukuvara. Ipapo, iyo kapu inoshandiswa kugadzira tembiricha yesimba remagetsi, iro rinogona kusvika pakadzika peganda uye kukurudzira kufamba nekukurumidza kweion uye kubhadharisa colloidal particles mumuviri. Kana kudedera, Capricorn inogadzira kupisa, uye panguva imwechete, pasi pechiito cheiyo polar mamorekuru resonance tekinoroji, kupisa iyo collagen tishu yedermis. Kana simba rinopisa remukati rakadzika re collagen rasvika pa45 ° C -60 ° C, rinowanzo gadzira contraction nekukurumidza, rinomutsa kuburitswa kweimwe collagen nyowani yekuzadza maburi eatrophic uye yakarasika collagen, uye nekugadzirisa zvekare nekugadzirisa nyoro nyoro ganda. Pakupedzisira inowana kusimbisa kweganda, kuzadza makwinya, kudzorera kusimba kweganda uye kupenya.
● RET musimboti
RET yakakwira-frequency chiridzwa chiyereso-chinorasa chishandiso chinogadzira yakakwira-frequency simba mumuviri wemunhu, inogadzira kupisa kwakadzika kubva paganda uye ganda ganda, uye inoora mafuta emuviri, nokudaro ichiwana kurasikirwa kwekurema. Kana iyo yepamusoro-frequency iripo ikapihwa simba kumuviri wemunhu, iyo vibration amplitude ishoma kwazvo, zvekuti ion kufamba haina kumbogadzirwa, uye hapana electrochemical reaction kana yemagetsi kuora kunoitika. Kana iyo frequency yakakwira ichiendeswa kune muviri wemunhu, nyama dzevanhu dzinopisa. Izvi zvinodaro nekuti kana yakakwira-frequency yazvino yaiswa mumuviri wemunhu, pese panoshanduka mafambiro, mamorekuru anoumba munyama anozunguzika, uye anozokweshana kuti aite kutenderera kutenderera, kukanganisa, uye kudhumhana. Iyi mamorekuru inofamba inokonzeresa nyama yemunhu kuti ibudise kupisa.
● CNC mutinhimira unodzvinyirira Tekinoroji
NaCNC metric pateni, yakashata kumanikidza inosanganisirwa neyakagadzirirwa yakagadzirirwa kushushikana kwekutsikirira musoro, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu eganda emuviri wemunhu, kushandisa kudzika kwakasiyana kwekukanya uye kukwiza muviri kune iyo epidermal matanda eganda, tsinga dzeropa, mafuta layer uye mutambi weiyo nervous system. inogona kunyatso kugadzirisa kuyerera kwemvura pakati pemasero emunhu, kuwedzera kufamba kwemasero, kumutsa maseru, kukurudzira kutenderera kweropa uye lymph kutenderera kweropa risingabatike-mudziyo, kumhanyisa metabolism uye kugadzirisa nharaunda yemukati yeganda.
Pashure: Q0 tetepa Vacuum Roller + Cavitaton + RF + infrared Chiedza
Zvadaro: 11 mitsara HIFU yechiso nemuviri
Vertical Physiotherapy Diathermy RET CET Vacuum ...